Fahad Yaasiin oo dhibaato siyaasadeed u wajahay aqoontii uu u lahaa Rooble - Caasimada Online
Home Warar Fahad Yaasiin oo dhibaato siyaasadeed u wajahay aqoontii uu u lahaa Rooble
Muqdisho (Caasimada Online) – Siyaasadda Soomaaliya abaalka ma xeyriso haddii uu abaalka boos sare ku lahaana sanadihii lasoo dhaafay waa la xiray qaanadaas.
Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay maalmihiisu dhammaad yihiin wuxuu ku jiraa siyaasiyiinta dagaalka ba’an ka dhex fuliyey nidaamka dowliga ah ee Soomaaliya tobankii sano ee u dambeysay.
Waxaa la fahamsan yahay inuu si weyn ugu ololeeyey in Xasan Sheekh Maxamuud uu kusoo baxo doorashadii dhacday 15-kii May, taasoo dadka qaar ay u dhigayaan inay dano gaar ah la xiriirto.
Rooble oo shalay u dhoofay waddanka isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa inta uusan dhoofin wuxuu hadal ka jeediyey shirkii Khamiislaha ahaa ee golaha wasiirada dowladda federaalka ah, kaas oo aan dhowr bilood la qaban, waxayna qaar kamid ah kalmadihiisa abuureen hadal heyn xoog leh.
Waa markii labaad asbuuc gudihiis oo uu Ra’iisul Wasaare Rooble weeraro ninkii lagu tilmaami jiray milkiilaha Dowladda ee Fahad Yaasiin.
Wareysi uu VOA siiyey ayuu Ra’iisul Wasaare Rooble sidoo kale ku sheegay inuu Xasan Shiikh kaga digayo inay dowladiisa yeelato milkiile, taasoo ka dhigan inay Labada Nin ee Rooble iyo Fahad toos ula baxayaan cadaawadoodii ka dhalatay siyaasadda.